Adobe Mampiseho fandrosoana amin'ny fitaovana famenoana fahalalana-atiny | Famoronana an-tserasera
Adobe dia mampiseho ny majika amin'ny «Content-Aware Fill» fitaovana
Fotoana fohy taorian'ny Adobe MAX 2019 dia naneho ny orinasa amerikana Ny fandrosoanao amin'ny majika izay mitranga miaraka amin'ny fitaovana famenoana votoaty. Fampisehoana vaovao nohatsaraina sy nohamarinina hanome valiny tsara kokoa.
Ary ny marina dia mihoatra ny tsy mampino ny dice. Ity fitaovana ity dia mitandrina hamafana nomerika ny faritra iray amin'ny sary hanoloana azy amin'ny santionany avy amin'ny faritra hafa amin'ny sary. Nanana an'ity endri-javatra ity nandritra ny fotoana fohy isika izao, saingy izao dia hihatsara tanteraka.
Raha ny marina ny zavatra nataon'i Adobe dia manome fifehezana bebe kokoa an'ireo mpampiasa amin'ny dingan'ny famenoana ary nanampy ny safidy "mandeha ho azy" sy "Custom" amin'ilay fitaovana. Azonao atao ny mijery ny horonan-tsary hijerena ny mazia mitranga.
Raha mampiasa ny safidy namboarina isika, afaka manao sary ara-batana ny pixel marina an'ny santionany haverina averina isika. Amin'ny fipihana ny "Auto", ny Photoshop dia hanao majika amin'ny alàlan'ny teknolojia Adobe Sensei ary efa hitantsika miasa ihany koa amin'ny fampiharana vaovao antsoina hoe Fresco ho an'ny iPad.
Sensei izay ataony dia tadiavo ho azy ny safidin'ny piksel izay "azony" tsara kokoa izany ho an'ny famenoana. Raha lazaina amin'ny teny hafa, amin'ny farany dia tavela miaraka amina karazana tsangambato majika isika izay tompon'andraikitra amin'ny fanaovana tsy hita maso ireo singa-tsary iray izay tianay halaina.
Manoro hevitra anao izahay jereo ny horonantsary mba hahitana azy am-perinasa tanteraka ireo fiasa vaovao amin'ny Content-Aware Fill ary miasa tsara toy ny hoe manao majika amin'ny sary na sary isika. Hoot iray hafa ho an'ny Adobe, izay mbola tapa-kevitra ny hahita ny fialantsiny tsara indrindra hifindrana amin'ny maodelin'ny famandrihana ao amin'ny Creative Cloud.
Raha mila majia ianao, faharetana kely ary tsy ho ela ianao dia afaka mankafy ny fanavaozana vaovao izay ho tonga amin'ny Adobe Photoshop miaraka amin'ny Content-Aware Fill ary ireo safidy ireo ho fanaingoana na miasa miaraka amin'ny Adobe Sensei mandeha ho azy aza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Adobe dia mampiseho ny majika amin'ny «Content-Aware Fill» fitaovana
Antonio Casanova dia hoy izy:
Ny Content-Aware Fill dia kopian'ny sivana Resynthesizer izay efa tao amin'ny GIMP, tamin'ny 2007. Nahomby izany na GIMP na Photoshop.
Valiny tamin'i Antonio Casanova